Myanmar Health – Healthy Life Journal
သွေးတစ်ကြိမ်လှူတိုင်း လူနာနှစ်ဦး-သုံးဦးကို ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်
ဒေါက်တာဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး (လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမျိုးသားသွေးဌာန၊ ရန်ကုန်) မေး. အမျိုးသားသွေးဌာနကနေ ဆေးရုံတွေကို သွေးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ အနေအထားလေး သိပါရစေဆရာမ။ ဖြေ. အမျိုးသားသွေးဌာနက ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအပြင် ကျန်တဲ့အစိုးရဆေးရုံတွေကိုလည်း သွေးထောက်ပံ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ခုတင် ၅၀ဝ ဆံ့ဆေးရုံကြီး၊...
မြန်မာလူမျိုးတို့ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်းမှာ အစားအသောက်ဆင်ခြင်မှု အားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာလူမျိုးတို့ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း များပြားလာရခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုသည် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ဂရုစိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဦးကိုကိုက ပြောကြားသည်။ “ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းမြင့်မားလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါတွေ (Non-Communicable Diseases) အဖြစ်များစေတဲ့...
“မြောင်းမြကို ပြောင်းပေမယ့်လည်း ပင်းတယအတွက်ပါ ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်နေပါဦးမယ်”ဆိုတဲ့ ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် “ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်”
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ် မြောင်းမြကို ပြောင်းရတော့မယ်”ဆိုသည့် သတင်းစထွက်လာသည်နှင့် ဓနုမြေမှ ငိုကြွေးသံများက လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်တွင် ဟိုတစဒီတစ လွင့်ပြယ်လာခဲ့သည်။ “ဆရာကလည်း ပင်းတယမှာပဲ နေလို့ရရင် နေချင်သေးတယ် . .ဆရာ လုပ်စရာလေးတွေရှိသေးတယ်”ဟု...
‘မွေးစကနေ ၆လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်တာက ဘယ်လောက်အထိ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သလဲဆိုတာ ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးက သက်သေပါပဲ’ဟု ချစ်သုဝေပြောကြား
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိခင်များနှင့်အတူ ထင်ရှားသည့် အနုပညာရှင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့အစည်းများက ကလေးမွေးပြီး ပထမ၆လ အထိ မိခင်နို့ချိုတစ်မျိုးတည်းကိုသာ တိုက်ကျွေး သင့်ကြောင်း သတင်းစကားဖြန့်ဝေခြင်းကို ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှိ ရန်...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ (၁၁)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘဝနှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား အမှားလားဟူသည်ကို စာဖတ်သူတို့ တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်ရန်...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၁၀)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန် တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘဝနှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၉)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘဝနှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား အမှားလားဟူသည်ကို...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၈)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းကျန်းမာရေးိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘဝ နှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား အမှားလားဟူသည်ကို...
အမှန်လေလား၊ အမှားလား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ(၇)
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သား ထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘဝနှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး...
၊ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ၊ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တလွဲယုံကြည်မှုတွေရှိကြသည်။ အမှန်တွေကို မှတ်သားထားသည်က ကိစ္စမရှိ။ မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကို လွဲမှားစွာယုံကြည်လက်ခံထားပါက ဘဝနှင့်ရင်းကာ အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှန်လေလား၊ အမှားလားဟူသည်ကို...